သတ်သတ်လွတ်သည်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သတ်သတ်လွတ်သည်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
အဆိုပါစာရင်းကို သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ နောက်ဆုံးတော့ရှည်ရရှိရန်စတင်နေသည်. ဒါဟာအနည်းငယ်သွားရဖို့နှေးကွေးနေပေမယ့်ပါပြီစေခြင်းငှါ, သက်သတ်လွတ် မြင်ကွင်းတစ်ခုနောက်ဆုံးတော့ချွတ်တာဖြစ်ပါတယ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်သိ ထို အမဲသားကိုဗဟိုပြုဟင်းလျာများအဆိုပါ menus တွေလွှမ်းမိုး အများအပြားဥရောပနိုင်ငံများရှိ. သို့သော်အမှုအရာပြောင်းလဲပြီ. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, သင်တစ်ဦးခရီးသွားလာသက်သတ်လွတ်နေလျှင်သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သွားပါရန်မလိုပါ. မဟုတ်သလိုသင်ကိုယ်တိုင်အဘို့အသီးသန့်ဖြည့်တင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ဘာလင်, ဂျာမနီ
ရိုးရိုးသားသား, အသားလွတ်သွားအတွေးမှာ swoling ပိုမျိုးချစ်စိတ် restauranteers အချို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှုတ်ဆက်ပြီးသောစားသောက်ဆိုင်, ငါတို့သည်သင်တို့မှပယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးထုပ်ကိုယူ! ဘာလင်ယခုသက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခင်းကျင်းကမ်းလှမ်း. ကျနော်တို့ပြောနေတာကနေ သက်သတ်လွတ်ရေခဲမုန့် အဆိုပါအထင်ကြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘာဂါမှ. အများစုသည်သက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင် ဘာလင်အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည် လည်းစူပါခေတ်မှီ. ဘာလင်ပင်အမည်ရှိ၏ Saveu အားဖြင့်လောကဓာတ်၏နယူးသတ်သတ်လွတ်မြို့တော်r ကိုအတွက် 2015. ထိုအပင်ကိုအများဆုံးရိုးရာစားသောက်ဆိုင်မှာ, ကျွန်တော်တို့ကိုတို့တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားဘို့အသင့်လျော်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ဘာစီလိုနာ, စပိန်
ကျနော်တို့လုံးဝ Sain ကိုချစ်ကြောင့်သတ်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထားပြီးဘယ်လို! ဘာစီလိုနာ, အထူးသဖြင့်, ကြိုဆိုခံရဖို့ဒါစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကိုယ်နှိုက်က '' veg-ဖော်ရွေကြေညာ, အတွက်သက်သတ်လွတ်နှင့်အသက်သတ်လွတ်ယဉ်ကျေးမှု၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး '' မတ်လ 2017. မြို့တော်ခန်းမပင်မြို့ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သက်သတ်လွတ်လမ်းညွှန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသားလွတ်တနင်္လာနေ့စမ်းရန်၎င်း၏နေထိုင်သူများအားပေးခဲ့. အများဆုံးသောနေရာများလိုပဲ, သငျသညျရိုးရှင်း veg-ဖော်ရွေသောနေရာများနှင့်တူသောသက်သက်သာသက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးရောနှောတွေ့ပါလိမ့်မယ် BioBento နှင့်သင့်လျော်စွာ-အမည်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်. ကိတ်မုန့်ကိုနှစ်သက်? ထိုအခါသင်သည်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ် Santoni ကဖေး, အရာသက်သတ်လွတ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ပီဇာ, သက်သတ်လွတ် muffins, နှင့်သက်သတ်လွတ် croissants, သည်အခြားအရသာရယူထားသောအကြား.
သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
သငျသညျဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းသက်သတ်လွတ်-ခရှာနေလျှင်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ထက်ကိုကြည့်ရှု စတော့ဟုမ်း. ဤလူကြိုက်များသောစကင်ဒီနေးဗီးယန်းမြို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုသေချာပေါက်ဖန်တီးသည် သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ. ဒါဟာရထားဖို့လည်းစူပါလွယ်ကူပါတယ်! လက်လွတ်ဖို့မတစ်ခုမှာသက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင်: အတော်များများက Herman ထင် (www.hermans.se) ဥရောပအကောင်းဆုံးသက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကမြို့သူမြို့သားတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်နှင့်အတူတစ် All-သင်စားနိုင်ပါတယ်သက်သတ်လွတ်ဘူဖေးပူဇော်.
သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
အံ့အားသင့်? ကျနော်တို့ဒါစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး! ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကယ့်ကိုအားလုံးရှိပါတယ်! သက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ငွေပမာဏအပါအဝင်. Soho နိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံး All-veg အရက်ဆိုင်ဝါကြွားတတ် - နည်းပြ & မြင်းများ လန်ဒန်ရဲ့ဖြစ်ပါသည် (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလန်ရဲ့) အကောင်းဆုံးလူသိများသက်သတ်လွတ်စားသောက်ဆိုင်. ဒါဟာဗြိတိန်အရက်ဆိုင်ဂန္အပေါ်သက်သတ်လွတ်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် slants ကမ်းလှမ်း. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စွန့်စားခံစားနေခဲ့လျှင် vanilla က Black သငျသညျရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်သည်အဘယ်မှာရှိ! ကျနော်တို့ဘရာဇီးခွံမာသီးနို့နှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူသံလွင်အစအနများနှင့်ဂျေရုဆလင် artichoke ကိတ်မုန့်နှင့်အတူအ iced ထောပတ်သီးအကြံပြု. မည်သူမဆိုရန်သွေးဆောင်အသံ, မရင့်သက်သတ်လွတ်စား.
သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: Glasgow, စကော့တလန်
Glasgow – ရုံသက်သတ်လွတ်စိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ, ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့တဦးရဲ့ အများဆုံးသက်သတ်လွတ်-ဖော်ရွေမြို့ကြီးများ, နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ခုအမြဲတိုးပွားလာဆိပ်သက်သတ်လွတ်.
သစ်တစ်ခုဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ရှိတယ်လိုပုံရသည် ဟော့စပေါ့ နီးပါးအပတ်စဉ်ဖွင့်လှစ်, ထိုသို့များအတွက်ဝယ်လိုအားရှိကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်. အချိန်ပြီးနောက်အချိန်ကဗြိတိန်တွင်အများဆုံးသက်သတ်လွတ်-ဖော်ရွေသောအရပ်မဲပေးခဲ့သ. VegFest (ဥရောပအကြီးမားဆုံးသက်သတ်လွတ်ပွဲတော်) ယင်း၏တန်းစီဇယားမှ Glasgow ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်.
အတူဥရောပအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးရထားစီးစာအုပ်ဆိုင်မှယခုထက်မပိုကောင်းသောအချိန်ရှိခဲ့သည်ရဲ့ SaveaTrain သင်တစ်ဦးသက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ဆိုရင်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-europe-vegetarians%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ကျန်းမာရေး #ခရီးသွားကျန်းမာရေး #သက်သတ်လွတ် #သက်သတ်လွတ် အစာ အစားသောင်းကြမ်းသူ longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား